Fanairana momba ny zon'olombelona ao Oganda
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fanairana momba ny zon'olombelona ao Oganda
tafavoaka tapadi tassc
Novalian'ny polisy Ogandey tamin-kerisetra ireo mpanao fihetsiketsehana, namono olona 37 farafahakeliny, nandratra olona 65 hafa, ary nogadraina 350 ireo mpanao fihetsiketsehana Ogandey. Nangataka tamim-panajana ny TASSC fa handray andraikitra amin'ny fitantanana ny tompon'andraikitra Ogandey tompon'andraikitra amin'ireo fanitsakitsahana goavana ny lalàna sy fitsipika iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona ny Etazonia.
Ny fisamborana sy fitazonana ny kandidà ho filoham-pirenena, Robert Kyagulanyi, dia mariky ny famoretan'ny mpanao politika mpanohitra mialoha Oganda fifidianana nasionaly natokana tamin'ny Janoary 2021. Tokony hamotsotra an'i Kyagulanyi eo noho eo sy tsy misy fepetra ny manampahefana Ogandey ary hanaja ny zon'ny olona hanohitra am-pilaminana ny fihazonana azy.
Nosamborin'ny mpitandro ny filaminana i Kyagulanyi, fantatry ny besinimaro amin'ny anarana hoe Bobi Wine, tamin'ny 18 Novambra 2020, tao amin'ny distrikan'i Luuka, Ogandà Atsinanana, mialoha ny fihetsiketsehana nokasaina hatao. Nilaza ny mpitondra tenin'ny polisy, Fred Enanga amin'ny fanambarana fa i Kyagulanyi, mpilatsaka hofidina ho filoham-pirenena ao amin'ny National Unity Platform, dia nosamborina noho ny fanitsakitsahana ny lalàna Covid-19 tamin'ny alàlan'ny fanentanana ny vahoaka marobe ho an'ny fihetsiketsehana nataony. A hoy ny mpitondra tenin'i Kyagulanyi fa ny mpisolovava azy dia nolavina ny fahazoana miditra aminy. Ny manampahefana Namaly tamin'ny baomba mandatsa-dranomaso sy bala mivantana tamin'ny hetsi-panoherana taorian'izay tany Kampala sy ny toerana hafa, izay nitarika fahafatesan'olona, ​​ary naratra.
Ogandey eTurboNews ny mpamaky dia nitatitra vaovao mamintina mamintina ny toe-java-misy mampivarahontsana momba ny zon'olombelona ao Oganda milaza hoe: Tena tafavoaka velona tamin'ny herisetra tokoa aho satria nankany afovoan-tanàna. ”
Nicholas Opiyo, mpisolovava mpiaro ny zon'olombelona Oganda, dia nilaza tao amin'ny Facebook-ny.
“Orinasa toy ny mahazatra amin'ny lafiny roa izany. Ny tsy fanajana voalohany, raha ny marina, ny fiarovana ireo nahavita ny herisetra nateraky ny fanjakana 2016 tany Kasese. Faharoa, ny rà mandriaka, ny famonoana olona tsy ara-dalàna nataon'ny fitondrana Museveni tany Kasese. An-jatony no naiditra am-ponja noho ny fiampangana azy ho mpamadika sy mpampihorohoro raha ny mpamono an'i Kasese kosa dia ampiroboroboana amin'ny fanekena ny hetsika malaso fotsiny. Eny an-dalamben'i Kampala, namono olona hafa taorian'ny fisamborana an'i Bobi. An-jatony indray no voasambotra noho ny fandraisany anjara tamin'ny fihetsiketsehana raha mpamono olona 80 tsy nitondra fitaovam-piadiana teny an-dalambe no nanelingelina anao ny vokatry ny fihetsik'izy ireo. ”
Etazonia miorina Fiaraha-miombon'antoka amin'ny fanafoanana ny fampijaliana sy ireo tafavoaka velona (TASSC), mikendry ny hampitsahatra ny fampiharana fampijaliana na aiza na aiza no misy azy ary hanohana ireo sisa velona satria manome hery ny tenany, ny fianakaviany ary ny fiarahamonin'izy ireo na aiza na aiza misy azy ireo
Nanainga lakolosy fanairana tao Oganda ny TASSC omaly.
Eny an-dalamben'i Kampala, namono olona hafa taorian'ny fisamborana an'i Bobi. Ary indray, an-jatony maro no voasambotra noho ny fandraisany anjara tamin'ny fihetsiketsehana raha mpamono olona 80 tsy nitondra fitaovam-piadiana teny an-dalambe no nanelingelina anao ny vokatry ny hetsika nataon'izy ireo.
Nandritra ny fanambarana an-gazety niely ny zoma dia nangataka tamim-panajana ny TASSC fa handray andraikitra amin'ny fitantanana ny tompon'andraikitra Ogandey i Etazonia ho tompon'andraikitra amin'ireo fanitsakitsahana ny lalàna mifehy ny zon'olombelona iraisampirenena.
Ny famonoana fampijaliana sy ireo tafavoaka velona dia manohana ny fiaraha-mitantana (TASSC) dia natsangana mba hanomezana fahafaham-po ny filàn'ireo sisa velona amin'ny fampijaliana sy ny fanenjehana ary hiaro ny fisorohana ny fampijaliana sy ny fanohanana ireo sisa velona ao aminy. TASSC dia manome serivisy ho an'ireo velona, ​​anisan'izany ny serivisy ara-tsosialy, ny torohevitra, ny fisoloan-tena ara-dalàna, ny fampandrosoana ny mpiasa, ary ny mpisolovava mba hampitsaharana ny fampijaliana manerantany.
Ny governemantan'i Oganda dia nandinika lalina sy mendrika tokoa noho ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona tato ho ato. Ny TASSC dia nitodika tamin'ireny fanararaotana ireny tamin'ny fifantohana vaovao tato anatin'ny volana vitsivitsy, rehefa nahalala avy amin'ireo tafavoaka velona sy mpihetsiketsika ny fisamborana tsy ara-dalàna, fampijaliana ireo mpanohitra politika, fonja tsy ara-dalàna, fepetra fampidirana am-ponja tsy mendrika ataon'ny olona, ​​ary fanao mahatsiravina hafa ataon'ny manampahefana Ogandey.
Na izany aza, vao mainka natahotra ny TASSC tamin'ny hetsika farany nataon'ny manampahefana Ogandey. Amin'izao ankatoky ny fifidianana nasionaly izao ary ny fanoherana ny fitondrana ankehitriny, ny governemanta Museveni dia mitrandraka ny areti-mandringana COVID-19 ankehitriny ho fomba iray hampanginana izany fanoherana izany. Nandritra izay valo volana lasa izay, nampiasainy ny fameperana areti-mandoza ho fitadiavana fisamborana sy fampijaliana ireo mpikatroka Ogandey fanta-daza ary hampiorenana ny tahotra amin'ny vahoaka mahazatra amin'ny daroka am-bonoana ary hatramin'ny famonoana ny olom-pireneny aza noho ny fanaovana varotra an-dalambe tsotra mba hahavelomana ny Oganda. Fitokana-monina noho ny covid19.
Mampalahelo fa vao mainka niharatsy ireo fanararaotana ireo. Ny fampiasan'ny governemanta ny areti-mandringana ho toy ny anton'ny fampahoriana dia nipoaka tao anatin'ny roa herinandro lasa izay. Tamin'ny 3 novambra, nosamborin'ny manampahefana ny kandidà ho filoham-pirenena roa mety ho filoham-pirenena, Bobi Wine sy Patrick Amuriat, satria nanandrana nanoratra ny firotsahan-kofidiny izy ireo, satria ireo mpanohana izay nivory hanohana azy ireo dia nihoatra ny fetran'ny otrikaretina vahoaka be tao Oganda. Nandritra ny fisamborana azy dia jamban'ny polisy vetivety i Bobi Wine.
Tao anatin'ny herinandro lasa izay, namoaka onja famoretana sy herisetra ara-politika ny manampahefana Ogandey, ary nampiasainy indray ny areti-mandringana ho toy ny fialan-tsiny amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Na dia nanao hetsika fampielezan-kevitra lehibe aza ny fitondrana, tamin'ny 18 Novambra, dia nosamborina indray i Bobi Wine ary notazonina taorian'ny fihetsiketsehana nataon'ny mpanohana, noho ny fandikana ny lalàna COVID-19 momba ny haben'ny vahoaka. Ho setrin'ny fisamborana an'i Wine, nanao fihetsiketsehana ny mpanohana tao Kampala renivohitra Uganda sy tanàna hafa. Taty aoriana, niaro ny famonoana ny minisitry ny filaminana any Oganda, nilaza tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana fa: “zon'ny polisy ny mitifitra anao ary maty tsy ahoan-tsy ahoana ianao.”
Raha tsy manao hetsika hanamelohana sy hanakanana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ataon'ny governemanta ny vondrona iraisam-pirenena, vao mainka hiharatsy ny herisetra. Ny TASSC dia dodona hanome porofo fanampiny momba ireo fanararaotana ireo amin'ireo izay mitovy amin'ny ahiahinay.
Hevitra Makro Supreme Keto